Sawirka Hoggaamiyihii Al Qaacidda ee Osama Bin Laden oo ka soo muuqday mid ka mid ah garoomada ugu caansan dalka Ingiriiska!! – Gool FM
(England) 25 Juun 2020. Hoggaamiyihii Al Qaacidda ayaa sawirkiisa waxa uu ka soo muuqday mid ka mid ah garoomada ugu caansan dalka Ingiriiska, iyadoo mid ka mid ah taageerayaasha uu soo qoray: “Bal eega Osama Bin Laden ayaa garab fadhiya!).
Kooxda kubadda cagta Leeds United ayaa garoonkeeda ka saartay baakad lagu soo dhejiyey sawirka Osama Bin Laden kaddib markii uu taageere lacag ku bixiyay in sawirka la dhigo mid ka mid ah kuraasta garoonka Elland Roard kulanka ay Sabtida la ciyaarayaan Fulham.
Jamaahiirta kooxda Leeds United ayaa waxaa fursad loo siiyey in sawirkooda oo baakad lagu dhejiyey la dhigo kuraasta garoonka kulanka Sabtida ay soo dhoweynayaan Kooxda Fulham.
Yeelkeede, hal taageere ayaa gudbiyey sawirka hoggaamiyaha Al Qaacidda ee Osama Bin Laden, iyadoo Jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta ay baraha bulshada iyagoo adeegsanaya ku kala qeybsameen arrintan.
Taageere ayaa ogaaday in sawirkiisa la garab dhigay sawirka hoggaamiyaha Al Qaacidda ee Osama Bin Laden, waxaana kaddib uu Twitter-ka ku soo qoray: “Bal eega waxaa i garab fadhiya Bin Laden”, waxaana uu soo raaciyay emoji ka tarjumaya inuu amakaaksan yahay.
Dhinaca kale Majaajiliistaha Ingariiska ee David Baddiel ayaa weerar ku qaaday Leeds United, madaama ay markii hore ogaan waayeen qofka uu yahay sawirkaas, waxaana uu Twitter-ka ku soo qoray: ““Waxaa cajiib ah in qof jooga Leeds oo wax bartay inuu ogaaday in xitaa taageerayaal macmal ah inaysan noqon karin wada cadaan, laakiin aqoon uma laheyn cida uu yahay Osama Bin Laden.”
Mid ka mid ah Taageerayaasha kale ee kubadda cagta ayaa isaguna dhankiisa soo qoray: “Waa wax aanan fahamsanayn sida uu sawirkaas uu dad badan u so dhexmaray, isla markaana cidna aysan aqoosan.”
Waxaa jiro taageerayaal si falfal xumo ah isugu qasa siyaasadda iyo isboortiga, waxaana la soo jeedinayaa in kooxaha isboortiga ay ka digtoonaadaan arrintaas.
Muxuu ka dhignaa laadkii xorta ahaa ee uu xalay dhaliyey Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos?